Nkwupụta mmekọrịta mmadụ na n'ime nchịkọta Google | Martech Zone
Gbaso nnweta Google nke PostRank, akwalite akụkọ mkparịta ụka n'ime Google Analytics iji tinye akụkọ ọhụrụ ise. Akụkọ ndị a "akara" ọdịnaya dabere na ọnụ ọgụgụ nke ihe ndị natara, njikọ, mkparịta ụka, tweets, na usoro mgbasa ozi mgbasa ozi ndị ọzọ. Akụkọ ọ bụla na-enye nghọta dị iche iche maka ọtụtụ akụkọ gbasara mmekọrịta gị na / mkpa.
1. Isi Report, nke gosipụtara mmetụta nke mgbasa ozi mmekọrịta na ọdịnaya. Akụkọ a na-agbaji ọdịnaya site na "Mkparịta ụka Ikpeazụ" na "Mkparịta ụka Mkparịta ụka enyere aka." Dịka ọmụmaatụ, ịnwere ike ịchọpụta oge ikpeazụ onye ọrụ nyochara ọdịnaya gị site na ikpo okwu mgbasa ozi mmekọrịta, yana ndị ọrụ oge ikpeazụ ma nweta ma gbanwee site na ikpo okwu mgbasa ozi.
N'ime Google Analytics, na-elekọta mmadụ taabụ bụ n'okpuru Standard Akụkọ nhọrọ.
2. Mkparịta ụka nke mgbanwe, nke na-enye gị ohere ịdebe saịtị ma ọ bụ ibe ọnụego ntụgharị a kapịrị ọnụ. Dị ka ọmụmaatụ, ị nwere ike ịgụta ọnụ ọgụgụ nke oge "Daalụ maka ịza ajụjụ" peeji nke ngosipụta, nke na-enye ihe na-egosi ọnụọgụ nke blọọgụ kwuru natara. Site na ndọtị, nke a na-agwa gị ole blog na-etinye ndị ahịa ma ọ bụ ndị na-agụ ya.
N'ime Google Analytics, chọta Mkparịta ụka Ntugharị n'okpuru Isi mmalite Okporo >zọ> Ọha> Ngbanwe.
3. Isi mmalite, nke na-enye gị ohere ịlele ihe ịga nke ọma nke ọdịnaya na ọkara kpọmkwem. Iji maa atụ, ị nwere ike ịchọpụta etu otu mgbasa ozi siri gaa na Facebook yana otu mgbasa ozi ahụ ma ọ bụ otu mgbasa ozi ndị ọzọ siri gaa na Twitter, wdg.
N'ime Nchịkọta Google, chọta Isi mmalite Ọhaneze na taabụ ọkọlọtọ ọkọlọtọ n'okpuru Isi mmalite Okporo ụzọ> Oha obodo> Isi mmalite.
4. Ndị Arụ Ọrụ, nke na-atụle ọnụ ọgụgụ nke mbak ọdịnaya ahụ na-anata, na-eme ka mgbasa ozi nke blog, infographic, ma ọ bụ ọdịnaya ndị ọzọ mara. Nke a bụ barometer dị irè karị iji chọpụta ewu ewu nke mgbasa ozi gafee usoro ntanetị mgbasa ozi dị iche iche.
N'ime Google Analytics, chọta akụkọ nkekọrịta na ọkọlọtọ ingkọ akụkọ n'okpuru Isi mmalite Okporo ụzọ> Social> Plugins.
5. Ọrụ Stream, nke bụ ndọtị nke akụkọ Social Plugins, na-enye nkọwa zuru ezu dị ka URL maka ọdịnaya ejiri, usoro nkekọrịta, ebe na mgbe ikesara ahụ, njirimara nke ndị keere ya, na nkọwa mgbe ị na-ekere òkè.
N'ime Google Analytics, a na-ahụ iyi Ọrụ na tabụkọ ọkọlọtọ ọkọlọtọ n'okpuru Isi mmalite Okporo Trazọ> Ọha obodo> Isi mmalite> Ọrụ Stream Stream
Nweta akụkọ ndị a dị mfe. Nanị banye ma ọ bụ banye n'ime www.google.com/analytics/, gbakwunye URL nke weebụsaịtị ị ga-esoro, detuo koodu nsuso emepụtara na ibe ọ bụla ka enyocha, ma ị dị njikere ịga!
Tags: Arụ ọrụGoogle Analyticselekọta mmadụ mediaAkụkọ gbasara mmekọrịta mmadụ na ibe ya
Jun 15, 2012 na 9:34 AM
Ọ bụrụ na ị nọ n'ọrụ na mgbasa ozi mmekọrịta (na ị kwesịrị ịdị!) Ọ dị mkpa iji nyochaa ihe ịga nke ọma. Nke a nwere ike inye aka duzie atụmatụ gị na-aga n'ihu. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịchọta na ihe Twitter na-atụgharị karịa Facebook, ọ bụ ihe ezi uche dị na itinyekwu mgbalị gị ebe ahụ.